FILOHA ANDRY RAJOELINA : Nigadona soa aman-tsara teto an-tanindrazana omaly
Tonga soa aman-tsara eto an-tanindrazana omaly tolak’andro, nanodidina ny tamin’ny 2 ora ny Filoha Andry Rajoelina sy ireo delegasionina notarihany rehefa avy niatrika ilay fihaonana faratampony faha-32 ny vondrona Afrikanina tany Addis Abeba-Ethiopie. 12 février 2019
Nandritra ny roa andro no nanatanterahana izany. Nanomboka tamin’ny alahady ary nifarana tamin’ny afak’omaly alatsinainy. Nisongadina nandritra ny lahateny nataon’ny Filoha, Andry Rajoelina tao anatin’ny fivoriambe fa nisafidy Filoha tanora ny vahoaka Malagasy, ary fotoana izao hanarenana ny fahataran’ny fandrosoan’i Madagasikara tato anatin’izay 58 taona nahazoany ny fahaleovantenany izay. Nahomby ity fivoahana ofisialy voalohany nataon’ny Filoha Andry Rajoelina ity.
Nisy ny fihaonana teo amin’ny Filoha Malagasy sy ireo tompon’andraiki-panjakana ambony nifantohan’izay fiaraha-miasa izay. Anisany nihaona taminy ny Filoha Etiopianina, Sahle-Work Zewde. Ny sekretera mpanatanteraka eo anivon’ny Uneca, Dr Vera Songwe. Ny Filoha Ivorianina, Alassane Ouattara ary ny sekretera mpanatanteraky ny Nepad, Ibrahim Mayaki. Raha fintinina ny vontoatin’ireo fihaonana ireo dia niompana tamin’ny fiaraha-miasa ho fanampiana an’i Madagasikara mba hahatontosan’ireo vinam-pampandrosoana noentin’ny Filoham-pirenena hampandrosoana ny firenena. Tsy izay ihany fa mba ho tombotsoan’ny vahoaka Malagasy ka anisany laharam-pahamehana amin’izany ny famatsiana herinaratra sy ny fanamboaran-dalana.